ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဆူဇူကီးအဲလ်တိုများ | ဆူဇူကီးအဲလ်တို ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Pearl White Suzuki Alto 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Silver Suzuki Alto 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl White Suzuki Alto 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
စူပါ မီနီ ဆိုဒ်ကား တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ ဆူဇူကီက ထုတ်တဲ့ အဲလ်တိုကားများကို ဈေးနှုန်း သက်သာခြင်း၊ အင်ဂျင်ပါဝါ သေးငယ်ခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်တွင်းမှာ အသုံးပြုသူ အနည်းစု ရှိနေပါတယ်။ တံခါး ( ၅) ပေါက် ကားလေးများ ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစား သေးငယ်လို့ လမ်းပိတ်ဆို့မူတွေမှာ အဆင်ပြေလို့ သုံးကြတဲ့ သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးလည်း ဆူဇူကီး ကယ်ရီ လေးတွေ လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဆူဇူကီး အဲလ်တိုကို ပြည်တွင်းမှာ ပုံစံ နှစ်မျိုးတွေ နိင်ပါတယ်။ တစ်မျိုးကတော့ ၂၀၀၄ ကနေ ၂၀၀၉ ကို ထုတ်တဲ့ ရှေ့ဖက် လေးထောင့်ကျတဲ့ ကား ပုံစံနဲ့ပါ။ သူရဲ့ အနောက်မှာ လာတဲ့ ကား အမျိုးအစားကတော့ ရှေ့ဖက် အနည်းငယ် လုံးဝန်းတဲ့ ပုံစံနဲ့ မီးလုံတွေ ပြောင်းသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရှေ့ ခေါင်းနဲ့ မီးလုံး ပုံစံက နည်းနည်း ရှည်မျောမျောနဲ့ လုံးဝတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဆူဇူကီ အဲယ်တိုလေးတွေဟာ သေးငယ်တဲ့ ကားအသေးစားလေးတွေ ဖြစ်သည့်နည်းတူစွာ အင်ဂျင်ပါဝါကလည်း သိပ်မကြီးလှပါဘူး။ ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး လောင်စာဆီ စားနှုန်း သက်သာတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆလင်ဒါ သုံးလုံး ၁၀၀၀ စီစီ နီးပါးရှိတဲ့ အင်ဂျင်နဲ့ ပြေးနေတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်နှုန်းထက် လောင်စာဆီစားနှုန်း သက်သာမှုကို အားပေးထားတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၃ စက္ကန့်နီးပါးအတွင်း သုညမိုင်ကနေ တစ်နာရီ ကို ၆၂ မိုင် ရောက်ရှိနိုင်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ မြန်တယ်လို့တော့ ဆိုလို့မရပါဘူး။ မန်နျူးဂီယာဖြစ်တဲ့ ဆူဇူကီး အဲယ်တိုတွေမှာတော့ ဓာတ်ဆီ တစ်ဂါလံကို ၆၅ မိုင်၊ ၆၆ မိုင်လောက် ရရှိတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို ဂီယာ လေးချက်တွေကတော့ တစ်နာရီ ၆၂ မိုင်ပြေးနိုင်ပါတယ်။
ကား အတွင်းဖက် အနည်းငယ်ရိုးစင်းပြီး ရေဒီယိုနဲ့ အဲယားကွန်း တစ်ချို့ပါဝင်ပါတယ်။ ကားပုံစံက နစ်ဆန်း မတ်ခ်ျလို လုံးဝန်းတဲ့ ဒီဇိုင်းမဟုတ်ဘဲ ကားရှေ့က ဘောနပ်က လေးထောင့်ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးယောက်စီးနိင်မှာ ဖြစ်ပြီး နောက်မှာ နောက်ဖုံးကို ဖွင့်ပြီး ပစ္စည်း အနည်းငယ် တင်လို့ ရပါတယ်။ နောက်ဖက်က ထိုင်တဲ့နေရာကတော့ ပုံမှန်ကားတွေထက် အနည်းငယ် ထိုင်ရတာ ကျဉ်းကျပ်ခြင်း ဖြစ်နိင်ပါတယ်။
ဆူဇူကီက ထုတ်ထားတဲ့ ကား အသေးစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းကို ရောင်းရခြင်း ဖြစ်စေတဲ့အကောင်းဆုံး အချက်တစ်ခုကတော့ ဈေးသက်သာခြင်းနဲ့ လောင်စာဆီ သက်သာ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် မျိုးဆက် (၇) ခုထိ ထွက်ရှိနေပါပြီ။ ၁၉၇၉ မှ စပြီး ထွက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပေါ်လစီကြောင့် မျိုးဆက် (၆) ခုမြောက်နဲ့ (၇) ခုမြောက်ကို အများဆုံး တွေ့ရပါတယ်။ ၂၀၀၄ကနေ ၂၀၀၉ အထိထုတ်တဲ့ (၆) ခုမြောက်မျိုးဆက်နဲ့ ၂၀၀၉ ကနေ ယနေ့အထိ ထုတ်တဲ့ (၇) ဆက်မြောက် မျိုးဆက်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ လောက်ကို ကျပ်သိန်း ၆၅၊ ၇၀ လောက်ဖြင့်ရနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင် အဲတိုလ်တွေကို အများဆုံး တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အညှိရောင်၊ ငွေရောင်၊ စတဲ့ အရောင်တွေကိုလည်း ရနိင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ သိန်း ၁၀၀ ၀န်းကျင်လောက်ထိ ဈေးရှိပါတယ်။
၂၀၀၈ ၊ ၂၀၀၉ မျိုးဆက်နဲ့ နောက်ပိုင်း ပုံပြောင်းဖြစ်တဲ့ ကား အမျိုးအစားတွေကို အတွေ့ရများပါတယ်။ နောက်ပိုင်းလာတဲ့ အထဲက အဲလ်တိုတွေက ၆၆၀ စီစီ ကားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို ဂီယာ၊ ဓာတ်ဆီ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်နျူးယယ်ကားလေးတွေကို လည်း တွေ့နိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇယ်တော့ မလာပါဘူး။ ပါဝါ ၀င်ဒိုး၊ လေအိတ်များ၊ ပါဝါ စတီယာရင်တို့ကို ရနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၆၆၀ စီစီ လေးတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဟိုက်ဝေးလမ်းတွေ အတွက်ကတော့ သိပ် အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။